Web Hosting လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖော် (WHSR) - သုံးသပ်ချက်များ၊ နှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်သိကောင်းစရာများ
အကောင်းဆုံးက Web Hosting
အကောင်းဆုံးက Web Host က Find
ပေါ်တွင်တည်ဆောက်လိုက်ဖို့ hosting အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လွတ်လပ်သောသုတေသန & ခက်ဒေတာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Web Hosting Picks
နှိုငျးယှဉျ & Choose
အကောင်းဆုံးစျေးပေါတဲ့ Web Hosting (<$5/ mo)
အကောင်းဆုံး Email Hosting န်ဆောင်မှုများ
အကောင်းဆုံး Unlimited web host
Hosting အကောင်းဆုံးစီမံ WordPress ကို
Providers Hosting အကောင်းဆုံး VPS
A2 Hostingshared $ 3.92 / mo မှာစတင် hosting ။
BlueHostshared $ 2.95 / mo မှာစတင် hosting ။
GreenGeeksEco-friendly hosting အတွက် $ 2.95 / mo မှာစတင်သည်။
HostGator$ 4.95 / mo မှာစတင် hosting Cloud ကို။
hostingshared $ 0.80 / mo မှာစတင် hosting ။
HostPapaကနေဒါ hosting အတွက် $ 3.95 / mo မှာစတင်သည်။
InMotion Hostingshared $ 3.99 / mo မှာစတင် hosting ။
InterServer$5/ အသက်အဘို့အ mo မှာ hosting shared ။
Hosting ScalaSpanel VPS hosting ကို $ 13.95 / mo မှစတင်သည်။
SiteGroundshared $ 3.95 / mo မှာစတင် hosting ။
TMDHostingshared $ 2.95 / mo မှာစတင် hosting ။
WP အင်ဂျင်WP $ 29 / mo မှာ hosting နိုင်ခဲ့သည်။
Web ကို Host ကအခြေခံ ဘယ်လိုက web hosting အတွက်နှင့် domain name ကိုအကျင့်ကိုကျင့်။
Website တစ်ခု Host လုပ်ပါ လည်ပတ်နေသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုစီစဉ်ရန်နည်းလမ်းနှစ်နည်း။
Web Host တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ စျေးဝယ် hosting အတွက် 16 မှတ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း။
Setup SSL ကိုလေ့လာပါ ယုံကြည်ရသော CA မှစျေးပေါသော SSL ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ဝယ်ပါ။
တစ်ဦးကဘလော့ Start Step-by-step ဘလော့ဂ်စတင်မှအစပြုသူလမ်းညွှန်။
သင့်ရဲ့ Blog ကိုတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း သင့်ဘလော့ဂ်ကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်း ၁၅ ခု။
လမ်းညွှန် Hosting VPS ဘယ်လို VPS အလုပ်လုပ်? ဘယ်အချိန်မှာပြောင်းကာလဖြစ်၏?
switch က Web Host က အသစ်တစ်ခုကိုအိမ်ရှင်ရန်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များလွှဲပြောင်းရန်ကဘယ်လို။
Web Hosting ကုန်ကျစရိတ် သငျသညျကို web hosting အတွက်မည်မျှပေးချေသင့်သလဲ
တစ်ဦးကဝဘ်ဆိုဒ် Make သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းသုံးခု။
VPN အလုပ်လုပ်ပုံ ဘယ်လို VPN ကိုအလုပ်လုပ်တယ်နှငျ့သငျတစျလိုအပျသလဲ
အကောင်းဆုံး VPN ကိုရှာပါ VPN ကိုမည်ကဲ့သို့ရွေးရမည်နည်း။
WHSR Web ကို Host ကသူလျှိုမည်သည့် website ကိုမဆိုနောက်ကွယ်မှ infra နှင့်နည်းပညာဖော်ပြပါ။
WHSR ပွင့်နေချိန် Checkerquick စစ်ဆေးမှုများ website တစ်ခုကဆင်းလျှင်။
Web ကို Host ကနှိုင်းယှဉ် တခါမှာ3ကို web ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အထိနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
ပျေါထှနျးခဲ့ Web Hosting လျှို့ဝှက်ချက်
မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ၀ က်ဘ်နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပါ
ဤ site reCAPTCHA နှင့် Google ကကာကွယ်ထားသည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းမျဉ်းများ သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ hosting အတွက်နဲ့က်ဘ်ဆိုက်လမ်းညွှန်မြေပုံကဲ့သို့ဖြစ်၏ - သင်ဘယ်မှာသွားကြဖို့သိလျှင်သာအသုံးဝင်သော။
သာမန်အားဖြင့်, no-brainer အုပ်ချုပ်မှုကိုအမြဲထိုကဲ့သို့သော shared hosting အတွက်အဖြစ်တတ်နိုင်အစီအစဉ်နှင့်အတူအသေးစား start ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများအတွက်, သင့်ရဲ့ site အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အရေးပါသည် - ဤသူသည်သင်တို့တစ်တည်ငြိမ်ပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် hosting ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည်။
သင်၏ပထမဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကို hosting အတွက်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်
ဘယ်လိုက web hosting အတွက်နှင့် domain name ကိုကျင့်သောအကျင့်
အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံး domain name ကိုဝယ်ခြင်းငှါ
လက်ျာ hosting provider ကရှေးခယျြဖို့ကိုဘယ်လို
အသစ်တစ်ခုကို web host ကိုရန်သင့် site ကိုရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
SSL ကိုလက်မှတ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် install လုပ်နည်း
$5/ mo အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကောင်းဆုံးစျေးပေါ hosting အတွက်ဝန်ဆောင်မှု
အကောင်းဆုံးအီးမေးလ် hosting ၀ န်ဆောင်မှု
သေးငယ်တဲ့ / အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး hosting အတွက်
သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး Hosting ကိုရှာပါ
အတူသွားကြဖို့ရာကို web host ကိုဆုံးဖြတ်မပေးနိုင်ပါသလား?
သင် Chase မှဖြတ်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုရှေးခယျြနိုငျအောငျကျနော်တို့နှင့်အတူ sign up ကိုများနှင့်စမ်းသပ်မှုကို web န်ဆောင်မှု hosting - ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ.
hosting ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်စာရင်းထဲမှာမှတဆင့်နှိုင်းယှဉ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ် tool ကိုသုံးပါ။ သငျသညျတခါမှာ3hosting ကုမ္ပဏီများသည်အထိနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီးကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သင်လိုအပ်အသေးစိတ်စျေးနှုန်းအခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်လည်းအမြန်အပြစ်တွေ & cons ပြန်လည်သုံးသပ်ထွက်စာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Web Hosting Pick ၁၀ ခုကိုကြည့်ပါ
နှိုင်းယှဉ် Tool ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ
WHSR Web ကို Host ကနှိုင်းယှဉ် Tool ကို
နှိုင်းယှဉ်ချက်: BlueHost နှင့် InMotion Hosting
နှိုင်းယှဉ်ပါ: BlueHost vs SiteGround
နှိုင်းယှဉ်ချက်: Hostgator vs SiteGround
Web Hosting ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
A2 Hosting ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
InMotion Hosting ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Market ကလေ့လာမှု: ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုရင် Web ကို Host ကများအတွက်ငွေပေးချေနည်း
Hosting စျေးနှုန်းများနှစ်ပေါင်း 10 ဖို့နောက်ဆုံး 15 ကျော်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပါပြီ။
အစောပိုင်း 2000 ခုနှစ်, အခြေခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ $ 8.95 / mo အထုပ်စျေးပေါထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါစျေးနှုန်း $ 7.95 / mo, ထို့နောက် $ 6.95 / mo, $ 5.95 / mo နှင့်အောက်ပိုင်းမှကျဆင်းသွားသည်။
entry level ကို shared အစီအစဉ်ကိုသက်တမ်းတိုးကာလအတွင်းဆိုင်းအပ် & $ 3.40 / mo မှာ $ 4.94 / mo ကုန်ကျ,
entry level ကို VPS အစီအစဉ်ကိုသက်တမ်းတိုးကာလအတွင်းဆိုင်းအပ် & $ 17.20 / mo မှာ $ 20 / mo ကုန်ကျနှင့်
အစီအစဉ်များကို hosting အမြင့်ဆုံး shared နှင့် VPS $ 25 / mo နှင့် $ 170 ထက်ပိုမိုကုန်ကျမဟုတ် sould ။
အမှု၌သင်တို့ကိုသငျသညျကို web hosting အတွက်များအတွက်ပေးဆောင်သင့်တယ်ဘယ်လောက်တွေးမိ ...
ကုန်ကျစရိတ် Hosting ကျဘျဆိုကျထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုကိုဖတ်ပါ
Web Hosting အထူးလျှော့စျေးများ
GreenGeeks ကူပွန် Code ကို
ကူပွန် Code ကို: 10 နှစ် GreenGeeks ကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်စာရင်းသွင်းသူများအဘို့, shared hosting အပေါ် 70% အထိစုဆောင်းရန်ဤကူပွန် code ကိုသုံးပါ (အမိန့်ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ) ထုတ်ဖော်: WHSR လွှဲပြောင်းအခကြေးငွေလက်ခံရရှိ fr ...
Interserver ကူပွန် Code ကို
ကူပွန် Code ကို: WHSRPENNY Interserver shared hosting ကိုစိတ်ဝင်စား? ယခုတွင်၎င်းတို့ကိုတစ်လအတွက်ဒေါ်လာ ၀.၀၁ ဖြင့်သာစမ်းကြည့်နိုင်ပါသည်။ “ WHSRPENNY” (ဒီနေရာကိုမှာယူရန်) ။ ထုတ်ဖော်: WHSR ...
ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်: WHSR30 GlowHost တွင်ပထမဆုံးအကြိမ် ၀ ယ်ယူသူများအတွက် GlowHost web hosting အစီအစဉ်များတွင် ၃၀% လျှော့ချရန်ဤလျှော့စျေးကုဒ်ကိုသုံးပါ (အမှာစာရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ) ။ ထုတ်ဖော်: WHSR ကိုလက်ခံရရှိသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် Hosting နောက်ထပ်
True Cloud Hosting သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့စျေးသက်သာသလား။ တိမ်တိုက်စျေးနှုန်းသို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်ခြင်း
Cloud Computing သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်လောက်ကမှပိုမိုစီးပွားဖြစ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာပိုင်းအရမူ၎င်းအယူအဆသည်ပိုမိုကြာရှည်တည်ရှိခဲ့သည်။ 'Cloud' ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်အဓိကအားဖြင့် ref …
10 SiteGround Hosting အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်စရာများ
ဂျေဆန် Chow အားဖြင့်
SiteGround သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်နာမည်ကြီးသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီကစျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်အချို့သောသူများသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါစျေးနှုန်းသည်နှစ်ဆနီးပါးဈေးကျလာသည်နှင့်အမျှသုံးစွဲသူများကမူ ...
သင်၏နောက်စီမံကိန်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျင်းပမည်နည်း။ အကောင်းဆုံး Django hosting ဝန်ဆောင်မှုများ
Django သည်ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ အကြောင်းမှာနယ်ပယ်ကဲ့သို့ပင်ဤမူဘောင်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည်အမေရိကန်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံတို့၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြိုင်ဘက်နှစ် ဦး ကြားတွင်ပြိုကွဲသွားပုံရသည်။ dev အတွက်နှစ်သက်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
7 ဒိုမိန်းနှင့် Hosting အတွက် GoDaddy အစားထိုး
GoDaddy သည် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ကြီးမားသောဖခင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်းအကြီးမားဆုံးမှာတော့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။ ဒီအရီဇိုးနားအခြေစိုက်ဗေဟမုတ်သည် Jomax Technologies အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယနေ့တွင် ၁၈ မီလီယံကျော်ရှိသည်။
2020 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Cloud Hosting ပေးသူများ
ယနေ့အကောင်းဆုံးသော“ Cloud” hosting provider များသည်သုံးစွဲသူများအားအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းရုံထက်မကပေးနိုင်သည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏပြည့်နှက်နေတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားထားတယ်။ ဝဘ်ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ…
စဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံး VPS Hosting ပေးသူ (၂၀၂၀)
VPS Hosting အစီအစဉ်များသည်ဝက်ဘ် hosting ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအဖြေအများစု၏အားသာချက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူများစွာအတွက်အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၎င်းတို့သည်ဘွဲ့ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်အဆုံးသတ်ကြသည်။
Plesk vs cPanel: ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံး Web Hosting Control Panel ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ
Control panel များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် hosting အတွေ့အကြုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းတို့ကိုများစွာစဉ်းစားခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်လူကြိုက်အများဆုံး Web Hosting Control Panel နှစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ...
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Web Hosting ဆိုဒ်များ (၂၀၂၀)
* နောက်ဆုံးသတင်းများ - စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဇယားကိုအသစ်ပြောင်းသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည် freebies များကိုနှစ်သက်ကြသည်။ မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ရှုရမည်ကို web hosting တွင်ပင်လျှင် freebies အမြောက်အမြားရှိသည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ
လုံးဝအခမဲ့ Website ရဲ့ Domain Name ၏ Curious Case
အဆုံး 348 ၏အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထက်ပိုမို 2018 သန်းဒိုမိန်းအမည်များနှင့်အတူ, ဒိုမိန်းအမည်များကိုပူအရောင်းရဆုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။ တကယ်တော့, Assigned အမည်များများအတွက်အင်တာနက်ကိုကော်ပိုရေးရှင်းကြောင့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဝယ်လိုအားရှိခဲ့သည် ...
WordPress ကိုအသုံးပြုပြီးပထမဆုံးဘလော့ဂ်ဖန်တီးနည်း။ ဘယ်လိုငွေရှာနည်း။ ဘလော့ဂ်အသွားအလာကိုတက်တက်ကြွကြွဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲ။ အသုံးပြုရန်မှန်ကန်သောဘလော့ဂ်ရေးကိရိယာများဘာတွေလဲ။
အရာအားလုံးကိုလေ့လာပါ - အခြေခံမှသည်အဆင့်မြင့်ဘလော့ဂ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတက်ခ်ျများအထိ problogger များထံမှ“ ထိုနေရာတွင်ရှိနှင့်ပြီးသောအရာများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်” ။
WHSR Blogging သိကောင်းစရာများ
8,000 ဘလော့မှတ်ချက် Get လုပ်နည်း: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
ရိုင်ယန် Biddulph အားဖြင့်
မကြာသေးမီကငါပရဒိသု မှစ. ဘလော့ရေးသောအပေါ်မှာငါ့ 8,000th မှတ်ချက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီမှတ်တိုင်နှိပ်နောက်မှငါအရမ်းသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ 8,000 မှတ်ချက်များကိုဘယ်လိုသွားရမလဲအသေးစိတ်တစ်ဦးအမှုလေ့လာမှုကိုမျှဝေချင်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်သင် commen ချင်ကြဘူး ...
ဘလော့အမည်အကြံပြုချက်များ: သင့်ဘလော့သည်အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသောအမည် Pick ရန်သိကောင်းစရာများ
Azreen Azmi အားဖြင့်
တိုင်းရွက်ပေါက်ဘလော့ဂါရင်ဆိုင်နေရကြောင်းအကြီးမားဆုံးအခက်အခဲကဘာလဲ? သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်အတွက်နာမည်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ ဘလော့အမည်ဖြင့်သမုတ်သငျသညျတစျခုလုံးဘလော့ဂ်နှင့်တံဆိပ်အရာအသစ်အနေ, အထူးသဖြင့်လျှင်, အတော်လေးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ...
တစ်ဦးကဘလော့ဂ်သင့်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုစာရင်းဇယားနှင့်စာနယ်ဇင်းထုတ် post မှပဲတစ်လမ်းထက်ပိုပါတယ်။ တကယ်တော့စနစ်တကျအသုံးပြုအကျိုးအမြတ်မယူဘို့ blogging ထပ်မံသင့်ရဲ့များ၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုင်ခံ့စေဖို့မရှိမဖြစ် tool ကိုဖွစျစနေို ...
Online Venture တစ်ခုအသုံးပြုခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်အွန်လိုင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ရန်၊ ထုတ်ကုန်များကိုရောင်းရန်သို့မဟုတ်သင်၏နာမည်ကိုရယူရန်အတွက်အွန်လိုင်းနေရာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
သင်တစ်ဦးနည်းပညာ geek မပရိုဂရမ်မာဖြစ်ရန်မလိုပါ။
လက်ျာနည်းလမ်းကိုလိုက်နာပါ။ လက်ျာဘက်ပလက်ဖောင်းကိုရွေးပါ။ လက်ျာထုတ်ဝေ tools တွေကိုသုံးပါ။ သငျသညျ 100% ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများ / 50 အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များ
နောက်ဆုံးပေါ် Web Business & Development လမ်းညွှန်
Web ကို Tools များ
WannaFlix Pros: WannaFlix အကြောင်းငါကြိုက်နှစ်သက်သောအချက် ၁။ ၀ င်ငွေနိမ့်ခြင်း VPN နေရာရှိကုမ္ပဏီအများစုသည်တစ်လစာစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုနှုန်းကိုစတင်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်အများစုက t ကိုပတ်ပတ်လည်မှာထိန်းသိမ်းရန် ...
Pros: IPVanish မှာဘာကောင်းပါသလဲ ၁။ IPVanish သည်မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ Logging သည် VPN service provider အများစုအတွက်စစ်ဆေးမှုခံယူရသောအဓိကကျသောအချက်ဖြစ်သည်။ t ကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များ ...
Chaturbate နှင့်အခြား Django ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၁၀ ခု
Chaturbate သည်အလွန်ရေပန်းစားသော site တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်နည်းပညာက၎င်းကိုမောင်းနှင်သည်ကိုသင်တစ်ယောက်မှစဉ်းစားဖူးပါသလား။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပြိုင်တည်းတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုကိုမည်သည့်အချိန်၌မဆိုကြီးမားသောပရိသတ်သို့ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Cloudflare ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်မြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း (Simple Setup Guide)
Cloudflare ဆိုတာဘာလဲ။ Cloudflare သည် Content Delivery Network (CDN) အတွက်လူသိများသည်။ ဤအရာသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဝဘ်စာမျက်နှာ၏အမြန်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်ကူညီသည်။ ၎င်းကိုပြုလုပ်သောအဓိကနည်းလမ်းမှာ cache မှတဆင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Cl …
CyberGhost Pros: CyberGhost နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သောအချက် ၁။ ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ၁၄ မျက်လုံးဆိုင်ရာစီရင်ပိုင်ခွင့်အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သည် VPN service provider တွင်အရေးအပါဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သာမာန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက် ...
၇ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောကိရိယာများသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအကြီးစားအသွားအလာအတွက်စမ်းသပ်ပါ
၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအနက်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးသူပင်တစ်ချိန်ချိန်တွင်သို့မဟုတ်အခြားသူများကသူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤစစ်ဆေးမှုအများစုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မြန်နှုန်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံညွှန်းကိန်းများပေါ်တွင်သာအာရုံစူးစိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘာလဲ
ယနေ့သတင်းအချက်အလက်ခေတ်တွင်ဒေတာသည်ငွေကြေးအသစ်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်ယနေ့အွန်လိုင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးမည်သည့်အရာနှင့်မျှမတူအောင်ခိုးယူခြင်း၊ လဲခြင်းသို့မဟုတ်လဲလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုအွန်လိုင်းကာကွယ်ရန်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ အဖြေက VPNs ကို ဦး တည်စေသည်။
VPN အလုပ်လုပ်ပုံ / စဉ်းစားရန်ထိပ်တန်း VPN န်ဆောင်မှု 10
Cloudflare ကိုလူသိအများဆုံး Content Delivery Network (CDN) ဟုလူသိများသည်။ ယနေ့တွင်၎င်းသည်ယခင်ကတိုးတက်ခဲ့ပြီးကွန်ယက်နှင့်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့မစ်ရှင်: bu ကူညီဖို့
NordLynx NordVPN အမြန်နှုန်းကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်
NordLynx သည် WireGuard ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အဆင်ပြေစွာတည်ဆောက်ထားသော NordVPN ၏ protocol တစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောကန ဦး စမ်းသပ်သူများ၏အဆုံးစွန်အားဆက်သွယ်ရေးပရိုတိုကောတွင်မျိုးဆက်သစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် WireGuard မှ…
သတိပြုပါတရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်သော VPN အားလုံးအတူတူမဟုတ်ပါ
ဆယ်စုနှစ်လေးခုကျော်တရုတ်စီးပွားရေးစတင်ဖွင့်ကတည်းက ထိုအချိန်ကာလအတွင်း၌နိုင်ငံသည်ရေနံရှာဖွေတူးဖော်ခြင်းမှသည်နည်းပညာအထိအရာအားလုံးကိုပျံသန်းခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ...
ExpressVPN နှင့် NordVPN: မည်သည့် VPN သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝယ်ယူမှုဖြစ်သနည်း။
Virtual ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်များလောကတွင်နာမည်ကြီးနာမည်များစွာရှိသည်။ NordVPN နှင့် ExpressVPN တို့ထက်ကျော်ကြားမည်မဟုတ်။ ဤဗေဟမုတ်နှစ်ကောင်သည်လယ်ကွင်းကိုကာလကြာရှည်စွာအုပ်စိုးခဲ့သည်။ သူများအတွက် ...
VPN များသည်တရားဝင်လား။ VPN အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်သောနိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံ
၎င်းသည်အချို့အတွက်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ပေမည်။ သို့သော်အချို့သောနိုင်ငံများတွင် Virtual Private Networks (VPN) ကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ VPN အသုံးပြုမှုကိုလုံး ၀ တားမြစ်သည့်နိုင်ငံများစာရင်းသည်တိုသော်လည်းအချို့မှာမူ…
Incognito Mode ရှင်းလင်းချက် - ၎င်းကိုသင့်အားအမည်မသိဖြစ်စေသလား။
Incognito Mode သည်သင်ကြည့်ရှုခြင်းသမိုင်းကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုရန်တားဆီးပေးသောဆက်တင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများစွာသည် incognito mode ကို Google Chrome ၏ private browsing feature နှင့်သာတွဲဖက်ထားသော်လည်းယေဘူယျအားဖြင့်…
WHSR ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေခြင်းနှင့် website တစ်ခု hosting နှင့်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်အကူအညီပေးသူကိုအသုံးပြုသူများအတွက် tools များဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
အဆိုပါ hosting ဈေးကွက်ပံ့ပိုးပေးထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစည်ကားနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမီးခိုးဖန်သားပြင်ကိုရှင်းလင်းနှင့်ဤကုမ္ပဏီများသည်ပူဇော်အရည်အသွေးနှင့်တန်ဖိုးကို၏အဓိကရန်သင့်အားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
WebHostingSecretRevealed (WHSR) သည်ဆောင်းပါးများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်ကူညီရန်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိရိယာများကိုတီထွင်သည်။
အကြောင်းအရာ . အတိုကောက်အဘိဓါန် . ဘာသာပြန် . ခွင
ကြှနျုပျတို့နောကျလိုကျပါ: Facebook က . တွစ်တာ
31150 Perak မလေးရှား
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များလည်း HostScore . ဒီသီချင်း
ဝဘ်ဆိုက် Tools များ & သိကောင်းစရာများ
အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Website Builder
ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုမည်သို့အသုံးပြုနည်း - ပြည့်စုံသောလူသစ်လမ်းညွှန်
Plesk vs cPanel: Hosting Control Panel ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ
Unlimited Hosting အကြောင်းအမှန်တရား
ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်သူ - Wix / Weebly
စတိုးတည်ဆောက်သူ - BigCommerce / Shopify
VPN များသည်တရားဝင်လား။ VPN အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်သောနိုင်ငံများ
VPN တစ်ခုကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ - လမ်းလျှောက်ရန်လမ်းညွှန်
VPN ကိုသုံးသပ်ချက်များ: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / IPVanish / TorGuard
Hosting Bandwidth ဘယ်လောက်လိုအပ်ပါသလဲ။
TOR ကို Browser ကိုသုံးပြီးအမှောင် Web ကိုသုံးစွဲနည်းကိုဘယ်လို
တစ်ဖိုရမ်ဝက်ဘ်ဆိုက် Start နဲ့ Run ဖို့ကိုဘယ်လို
အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအကြံပြုချက်များ၏ Big စာရင်းကိုသင်စတင်ရန်
ငွေဘလော့ဂ် Make ဖို့ကိုဘယ်လို: တစ်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်သူဖြစ်လာခြင်း
တစ်ဦးကဂေါက်သီးဘလော့ကိုသင်စဉ်းစားပါထက် (ထိုတစ်ခုမှာ Start လုပ်နည်း) နောက်ထပ်အမြတ် Be နိုင်ပါစေအဘယ်ကြောင့်